EA079-SETS-OMG Ndekọ Mkpu Mkpu Fall Mgbochi Bed Pad Set-Mkpu Ọdịda nke Na-arụ ọrụ na Bed Pad & Pull-String-OMG Solutions
Mkpokọta Nzube Puru iche
EA079-SETS DUAL Recordable Voice Monitor na-arụ ọrụ dị ka onye na-adọtị eriri na-enyocha ma ọ bụ ihe ngosi sensọ pad ma nwee ike ibugharị ya ngwa ngwa site na akwa ruo oche nkwagharị na azụ, si otú a na-ewepụ mkpa nke ọtụtụ ngwaọrụ nlekota. Oti mkpu na-eme ka ndọta ndọta ndọtị na-enweghị ikike ma ọ bụ mgbe a wepụrụ nrụgide na mpe mpe ije. Nyochaa na-akpaghị aka mgbe ana-edochi eriri ndọta ma ọ bụ mgbe etinyere mgbali na pad sensọ emetụtara.
Ederede ahaziri iche
Wepu mkpu mkpọtụ site na ịdekọ ozi ahaziri onwe gị ka akpọghachi mgbe agbanyere mkpu. Upnwere ihe ruru sekọnd iri na ise nke ị na-akpọgharị, ịnwere ike idekọ olu dị ụtọ ma ọ bụ ụda olu ị ga-anụ ka ụda njikere, dịka “Biko nọdụ Oriakụ Jones, enyemaka dị n'ụzọ.”
Na-akwụ ụgwọ oge niile
Ezubere ileba anya a na-enweghị ngbanwu ON / Gbanyụọ, nke pụtara na ọ dị mgbe ọ bụla, enweghị ike ịgbanyụ ya. Ndị na-elekọta na-eji bọtịnụ nrụpụta ngwa ngwa dị mfe iji dochie mkpu ma soro na-egbo mkpa ndị bi na ya n'enweghị ike ịhapụ mkpu mkpu na mberede.
• Ọkachamara Ọkachamara
• Ọrụ abụọ
• Recordable Voice nhọrọ
• Pkwụ Mpekere Lost, Obere Batrị & Igwe Ngosipụta Ọnọdụ Mkpu
• Nọọsụ oku Nọọsụ
• Ihe mgbochi ihe mgbochi ihe ndina 10 ″ x30 ″
• Nhọrọ nlekota oru: Oche chara acha, Floor Mat, Seat Belt na Fall Mattress
• Batrị adịghị (3-AA)
EA079-AKETKỌ: Recordable Voice Mkpu Fall Mgbochi Ndina Kedo akwa Set - Fall mkpu na-arụ ọrụ na ndina Kedo akwa & Sere-eriri (1 afọ akwụkwọ ikike)
EA079-PB: Ihe mkpuchi ọla ọcha na akwa adịghị ọcha 10 ″ x30 ″, Ogwepụta Mwepụta Ọdịmma maka Mbelata Ọda (akwụkwọ ikike afọ 1)
EB079-AL Mkpu ụda olu nwere ike ịda maka Mbelata Ọda (akwụkwọ ikike afọ 1)
Nzuzo 592 1 Echiche Taa